10 Shirkadaha caanka ah ee loo yaqaan "Syarikat Pembangunan Plugin WordPress '
Istaraatiijiyada isticmaalka CMS iyo saamiyada suuqa (sumber: W3Tech).
Sababta ugu muhiimsan ee u shaqeysiinta laman web shaqadeeda WordPress waa fureerooyinka. WordPress ayaa awoodda oo dhan ka soo jiidata. Plugin Kobcinta Custom WordPress waa dookh kale oo keena awooda website-ka ganacsigaaga.
Dalam catatan ini, Waxaan doonayaa inaan ku siiyaan liis gaar ah oo ka mid ah toban USA shirkadaha horumarinta plugin WordPress ee kaa caawin doona sameynta bogga internetka ee ganacsi oo cajiib ah.
1.6 6. Lapan25media
1.8 8. Iskuduwaha Interaktif
1.9 9. Media Fountain Biru
Teknolojiyada Varshyl waxaan ku fadhiyaa lambarka laba lambarka liiska. Waa mid aad u caan ah naqshadaha gaarka ah ee mawduucyada WordPress plugin iyo. Waxay ka shaqeeyaan Milpitas, California – Amerika Syarikat. Waxay sidoo kale leeyihiin xididada Hindiya iyo Australia. Inkastoo, waxay leeyihiin mawaarinno kala duwan oo ay ku leeyihiin karti-xirfadeedka, haddana horumarinta WordPress-ga ayaa ah sida USP-da.
Adeegyadooda waxay ku kala duwan yihiin jauh tiirar oo kala duwan,
Penyelesaian CMS Custom
Waxay mempunyai iyo jeer ilaaliyaan diiradda saaraan tayada, asalka iyo farshaxanka farshaxanka ee dhammaan khidadaha caadooyinka ah ee loogu talagalay gaar ahaan baahiyaha ganacsigaaga.
Macrosoft Inc waa New Jersey oo saldhigeedu yahay IT-da. Waxay si fiican u yaqaanaan adeegyadooda gaar ahaan koritaanka webka WordPress. Hase yeeshee, waxay hadda leeyihiin shaqaale 300, si kastaba ha ahaatee, taasi ma ahan tirada kuwa horumariya. Si kastaba ha ahaatee, waxay leeyihiin liis dheer oo macaamiisha ah kuwaas oo ka dhigan horumarka laman web-ka ilaa horumarka WordPress.
Shirkadu waxay ku fadhidaa suuqa oo ku dhawaad ​​sanadaha 20. Tani waxay siinaysaa faa’iido u leh waayo-aragnimadooda tartanka. Adeegyadooda horumarinta WordPress, waxay bixiyaan adeegyo kala duwan ee horumarinta WordPress. Darajooyinkan waa horumarinta laman web-ka WordPress, horumarinta mawduuca WordPress, Adeegyada dayactirka WordPress iyo horumarka WordPress. Iyadoo khibradda noocaas ah ay leeyihiin aaggan, waxay yihiin doorasho suurta gal ah markaad raadineyso adeegyada horumarinta WordPress.
Baymediasoft waa shirkad horumarineed oo si fiican loo og yahay oo Maraykanka ku salaysan. Iyadoo ay ka soo baxayso di ka badan bogagga 1.800 ee 400 + macaamiisha faraxsan, waxay ku raaxeeysan yihiin doorashada ugu badan ee loogu talagalay adeegyada horumarinta WordPress. Waxaa si fiican loo yaqaanaa di la siiyo xalal gaar ah oo horumarinta WordPress.
Waxay yihiin xirfadlayaal aad u tababaran oo punya iyo jeer raadinaya nikwadal kala duwan oo xitaa miisaaniyada yaryar. Horumarintooda xirfadlayaasha ah waxay bixiyaan adeegyo horumarineed ee ugu horumarsan webka oo leh qaabka ugu sareeya.
Liisaska macmiilka ayaa sidoo kale qiimahoodu raadinayaan sidii ay u shaqeyn jireen oo ay u sameeyeen bogagga internetka ee shirkadaha kala duwan ee shirkadaha Xiriirka Discovery iyo Starbucks. Waxay kaloo aaminsan yihiin di ay barayaan macaamiishooda.
Sida magacaba ka muuqata, Eight25media waa hal talaabo oo horay loo sii wado shirkad. Waxay ku saleysan tahay Fremont, California. Waa abaalmarin ku guulaysatay dooxada saliida leh ee silikon. Si kastaba ha ahaatee, waxay sidoo kale leeyihiin xirfad ku saabsan adeegyada horumarinta WordPress ee plugin. Iyada oo adeegyadooda tayo leh, waxay kor u qaadeen ilaa $ 500 Malaayiin lacag ah.
Tani waa halka ay adeegyadooda horumarinta plugin ay ka duwan yihiin kuwa kale. Ma aha oo kaliya inay sameeyaan plugin, waxay u kobciyaan wakhtiga la siiyey. Xalkoodu way kala duwanyihiin waana mid aad waxtar u leh.
Codsiyada qiimaha markii ugu horaysay lagu soo bandhigay 2004. Qaybta ugu fiican ee shirkadani waxay tahay inay leeyihiin koox weyn oo ah 450 + horumariye xirfadlayaal ah oo maareyn kara mashaariic dhowr ah waqti. Tani waxay siineysaa qulqulo waxqabad oo u horseedaya in gaaraan alaabo tayo sare leh macaamiishooda.
Waxay leeyihiin macaamiisha 1,500 + macaamiisha faraxsan oo leh qadarin xajisan oo ah 96%. Tani waxay ina tusaysaa sida ay ugu wanaagsan yihiin adeegyadoodu maaddaama macaamiisha ay dooranayaan marar badan.
8. Iskuduwaha Interaktif
Iskuduwaha Interaktif waa shirkad horumarineed oo internet ah oo ku taala Manhattan ee New York City. Shirkaddu waxay bixisaa naqshado dhammaystiran iyo adeegyo horumarineed kuwaas oo ku xirnaan doona nooca ganacsigaaga.
9. Media Fountain Biru
Waxay khabiir ku yihiin falanqaynta feylalaha PSD si aad u qurux badan, si fiican loo qoondeeyey mawduucyada WordPress iyo plug-ah WordPress. Iyadoo gargaarkooda, waxaad samayn kartaa laman web-ka hodanka ah ee hodanka ah ee websaydhka ah oo ku socda wakhti degdeg ah.
WordPress wuxuu caan ku yahay dabacsanaantiisa iyo is-dhexgalka fudud. Awoodda WordPress e ka sarreysa
워드 프레스 wuxuu caan ku yahay dabacsanaantiisa iyo is-dhexgalka fudud. Awoodda WordPress ee ka
„WordPress wuxuu caan ku yahay dabacsanaantiisa iyo is-dhexgalka fudud“. „Awoodda WordPress ee ka sarreysa“